KINOKI (cleansing detox foot pads) (ခြေဖဝါး အပူထုတ်အဆိပ်ထုတ်ဆေးကပ်ခွာ) | Myanmar Free Ads ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / Medicine / KINOKI (cleansing detox foot pads) (ခြေဖဝါး အပူထုတ်အဆိပ်ထုတ်ဆေးကပ်ခွာ)
KINOKI (cleansing detox foot pads) (ခြေဖဝါး အပူထုတ်အဆိပ်ထုတ်ဆေးကပ်ခွာ)
Maung Pauk 12:30 PM Medicine
ဂျပန်ရိုးရာ ဆေးနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သဘာဝဆေးဝါးကို နှစ်သက်ကြသော အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယား၊ ထိုင်း၊ တိဗက်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့ကပါ ယုံကြည်စွာသုံးစွဲနေတဲ့တိုင်းရင်းဆေးနည်းဖြစ်ပါတယ်..
သဘာဝ သစ်မြစ်သစ်ဖုများဖြင့် စနစ်တကျ ဖော်စပ်ထားပြီးညအိပ်ခါနီး ခြေဖဝါးကို ပြောင်စင်အောင် ဆေးကြောကာ
ဆေးထုပ်လေးရဲ့ စာမပါတဲ့ဘက်ကို ခြေဖဝါးအလယ်မှာတင်ပါ..
အပေါ်မှာ အသင့်ပါလာတဲ့ ပလာစတာ ကပ်ခွာလေး ကပ်ပြီး အိပ်လိုက်ပါ... မနက်အိပ်ရာထရင် ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းရှိ အပူအပုပ်များ၊ အဆိပ်အတောက်တွေ လျော့ပါးကင်းစင်ပြီ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းတဲ့ အရသာကို ကိုယ်တိုင် ခံစားရပါလိမ့်မယ်..
အဲဒီဆးထုပ်မှာလည်း မည်းနက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. ခွာပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ရပါမယ်. တစ်ည ၂ထုပ်ကုန်ပါတယ်..
ခြေဖဝါး ၂ဖက်စလုံးကို ကပ်ပြီး အိပ်ရပါတယ်.. နေ့ခင်းဘက် မကပ်ရပါ။
၇ရက် ၁ပတ်လောက်ဆက်တိုက် အပူထုတ်ပေးမယ်ဆို သိသိသာသာ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းလာပြီး သွေးတိုးခြင်း၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်း၊
လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ကျောက်ကပ်မကောင်း၍ ဖောယောင်ခြင်း၊ ဘွတ်ဖိနပ် ဝတ်လျှင် ခြေထောက်မှ အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းတို့ကို သိသိသာသာ လျော့ပါးပျောက်ကင်းစေပါတယ်..
ဆေးဘူး၁ဘူးလျှင် ဆေး၁၀ထုပ်နှင့် ကပ်ခွာ၁၀ခု ပါရှိပြီး ၅ရက်စာ ခြေဖဝါး၂ဖက်ကပ်နိုင်ပါတယ်။ စတင်ကပ်ခါစ ၂ရက် ၃ရက်တွင် ခြေဖဝါးမှ အပူအပုပ် များ အဆိပ်ဓာတ်များ စုပ်ထုတ်ပေးခြင်းကြောင့် ပုရွက်ဆိတ်တက်သလို ယားစိစိဖြစ်တတ်ပါတယ်..။ ၁ပတ်ကျော်လျှင် နေသားတကျ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
ဈေးနှုန်းက 1လစာ 6ဘူး 15000ks သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်.. မှာယူလိုပါက 365 Online Shop, 09 451689031, 09 787179972 သို့ ဆက်က်သွယ်နိုင်ပါတယ်
ရန်ကုန်မြို့တွင်း Delivery services ဖြင့် အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပြီး မြို့နယ်အလိုက်
ပို့ခကျသင့်ပါတယ်။ နယ်မြို့များအတွက် ဘဏ်ငွေလွှဲပို့ပေးပီးပါက သက်ဆိုင်ရာ ကားဂိတ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်...